China Standard Kurema kusimudza Olimpiki makwikwi curl Barbell Bar 2.2m vagadziri uye vanotengesa | Meiao
Standard Kurema kusimudza makwikwi eOlimpiki curl Barbell Bar 2.2m
simbi ine electroplated
sirivheri + nhema
Opp bhegi, katoni uye nhovo
Logo Sticker logo inowanikwa
1. Kune akawanda asina kukodzera kapeti mumusika, ungaita sei kuti uve nechokwadi chekutonga kwemhando yepamusoro?
Meiao mutambo une makore makumi maviri nemana Factory Chiitiko.Bhokisi rega rega rezvinhu 'rinotariswa zvakapetwa zvisati zvatumirwa, uye mushumo wekuongorora mhando unozotumirwa kune vatengi vedu nezvigadzirwa, uye isu tinofara kukwikwidza Chechitatu-bato rekuongorora kambani mhando cheki.
2.How nezve yako yekugadzira chinzvimbo, uye ungaita sei shuwa kuti nhumbi dzangu dzinenge dziri kuendesa nenguva?
Meiao mitambo ine anopfuura 6700 mativi emamirimita uye 7production mitsara inomhanya mazuva ese 2 mashifti ane huwandu hwakawanda.
3.Ndinogona here kuisa diki diki yekutanga kekutanga kuyedza mhando?
Diki diki inogamuchirwawo, uye zvimwe zvigadzirwa zvatinopa zvemahara sampuro kuyedza zvigadzirwa zvedu zvemhando yepamusoro.
4.Ndinogona kushanyira fekitari yako?
Wako takatarisirwa kushanyira fekitori yedu.
Pashure: Zvimwe zvakasarudzika zvigadzirwa Zvakachipa uye zvinoshanda Gym Kunze Kwemidziyo Chrome Curl Powerlifting Barbell Bar
Zvadaro: Ruvara runotakurika Vinyl neoprene yakakomberedzwa cast iron kettlebell nemutengo wakachipa.
Nyore Kupenda Cast simbi Kurema ndiro Gray Ham ...
Kuvaka muviri Kunogara Kunogadziriswa Chromed Barbell ...
20 "uremu vachisimudza dumbbell mubato barbell ...
Wholesale mavara bhaa bhanhire Weight ndiro ...
Kwakakurudzira Cast simbi Chrome Barbell Plates bhaa ...
Hot kutengesa zvigadzirwa vakakanda simbi vachisimudza rabha b ...